Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » Duesseldorf HELAU! Izidenge ziphuma ngobuninzi ukubhiyozela ubomi!
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ingxelo yamanani eNtsholongwane kaCorona ayizange ibayekise abantu baseDuesseldorf, eJamani ukuba babhiyozele ubomi, kuthetha ukuthini ukubhiyozela ukuqala kweCarnival namhlanje.
IHoppeditz ivukile eDuesseldorf, kodwa hayi kangako eCologne!
E-Duesselorf, kwisiXeko saseJamani kuMlambo i-Rhine, Ukuqalisa komdlalo kwenzeke namhlanje nge-11 Nov, 2021 ngo-11:11 am kwiSeshini yeCarnival 2021/2022
ICarnival imalunga nezidenge. Kwaye badibana phambi kweHolo yeSixeko saseDuesseldorf
Ixesha ngaphandle kwecarnival eDuesseldorf liphelile.
IHoppitz ivukile. Ukufika ngexesha ngo-11.11. Ngentsimbi yeshumi elinanye waphuma ekhasa embizeni yakhe yemostade waza wafunda abaLevi abaziziyatha kubaphathi besixeko. INkosi uSodolophu uGqr Stephan Keller waphendula ngentetho emfutshane evela kwi-balcony, emva koko wehla waya eHoppitz Tom Bauer kwisikwere semarike.
Okwangoku, uninzi lwabahlobo be-carnival abakwazanga ukulandela umnyhadala wonyaka owawulindelwe ngomdla, njengoko benzile kulo nyaka uphelileyo, kodwa kwakhona emntwini kwindawo.
Amawakawaka asebenzisa eli thuba kwaye abhiyoza kunye nokuqala kweseshoni.
ICarnival eDuesseldorf ineslogan:
Emva kwentetho kaHoppeditz, iKomiti yeDüsseldorfer Carnival iye yabonisa umdlalo omtsha wecarnival kwiqonga elivulekileyo eliphambi kweholo yesixeko.
Phakathi kwabanye, i-Swinging Funfares kunye ne-KG Regenbogen, eyacula ingoma yesiqubulo, u-Alt Schuss, u-Kokolores, u-De Fetzter kunye nabanye abaninzi.
Kwiseshoni, izidenge ze-capital state ziya kukhokelwa yiNkosana uDirk II (uDkt. Dirk Mecklenbrauck) kunye neVenetia Uåsa (Uåsa Katharina Maisch).
Ngomhla we-13 kaNovemba, i-Jecken encinci ibhiyozela ukuvuswa kwe-mopeditz yabantwana kwi-Burgplatz kwivili likaFerris. U-Niklas Wesche oneminyaka elishumi ubudala osuka kwi-Rheinische Garde Blau-Weiss uya kubhiyozela i-premiere yakhe njenge-mopeditz yabantwana.
Ukukhethwa kwesibini senkosana kuya kwenzeka nge-19 kaNovemba e-Stadthalle. Ukusuka e-Altweiber kunye neRathaussturm nge-24 kaFebruwari 2022, iseshoni iya kungena kwisigaba esishushu. Eyona nto ibalulekileyo kumngcelele weRose ngoMvulo nge-28 kaFebruwari 2022.
Ngelishwa eCologne ekufutshane, isixeko apho iCarnival ikuhlobo lomntu wonke, inkosana yayigula yiCorona Virus.